Talo ku socota dhammaan lamaanayaasha is qaba ama xiriirku ka dhexeeyo. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Talo ku socota dhammaan lamaanayaasha is qaba ama xiriirku ka dhexeeyo.
Talo ku socota dhammaan lamaanayaasha is qaba ama xiriirku ka dhexeeyo.
Friday, August 25, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Sababtoo ah siduu ku ogaaday oo uu ku xukmiyay dumarka dhan xumaanta haddii uusan naago kala gadisan xumaan la soo sameynin.
Sidoo kale hadaad aragto gabar dhaheysa nimanka waqtigaan jooga dhan ma wada fiicna,ogow gabadhaasi horey ayey ula soo sameysay xumaan ama macsi niman kale,marka waxay u maleysaa in ragga dhan ay yihiin sidii kuwii ay qaladka(macsida) la soo sameeysay.
Sababtoo ah sidey ku ogaatay oo ay ku xukmisay ragga dhan xumaan haddii aysan rag kala gadisan xumaan la soo sameynin.
Ogow aqriste danbiga aad ilaahey ka gasho hadaadan ugu towbad keenin ilaahey ,inta aad dunida joogto ayuu kugu ceebeynayaa adoomadiisa hortood oo afkaada ayaad ku qiraneysaa maalin uun in aad danbi soo gashay sida tan oo kale,balse waxaa nasiib darro ah in maalin walba ereyadaan oo kale la is dhaho iyada oon la dareensaneyn in qofkani uu qiranayo in uu qalad horey u soo galay.
Ilaahey ha soo hanuuniyo inta xumaanta iyo danbiga gasha.